DHAAMSA HADARAA HUNDAAF: Hiriirra eegalme haga jijjiirraa hundee fidutti dhaabbachuu hin qabu. - Kichuu
[ July 4, 2020 ] Ajjeechaa Hacaaluu fi Hidhaa Jawaar fa’aa irratti Hiriira Mormii Hawaasa Oromoo.	Videos
[ July 4, 2020 ] Colonel Abiy ilmaan Oromoo akka binenssaa ademssissaa jira!	News
[ July 4, 2020 ] ONN: Qeerroo fi Qarree USA fi Australia irraa Afaan Ingliifaan	Videos
[ July 4, 2020 ] Explained: Who was Hachalu Hundessa, whose death triggered protests in Ethiopia?	Africa
[ July 4, 2020 ] Defusing Ethiopia’s Latest Perilous Crisis	Africa
[ July 4, 2020 ] jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raaw’atameef haqni .	News
[ July 4, 2020 ] “ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሥልጣን ይልቀቁ” የኦሮሞ ተቃውሞ አራማጆች	Amharic
HomeAfaan OromooNewsDHAAMSA HADARAA HUNDAAF: Hiriirra eegalme haga jijjiirraa hundee fidutti dhaabbachuu hin qabu.
#Hiriirra eegalme haga jijjiirraa hundee fidutti dhaabbachuu hin qabu. Kun murtii Qeerroof Qarree ta’uu qaba. Jijjiirama hundee ta’uu baannaan barabaraan ykn guyyaa guyyaan dhukubsanna. Kunis dhukkuba fayyina hin qabne (chronical disease) nutti ta’a. Oromoon bara dhibbaaf shantama (150) dhiiga boo’eera. Isa dhiyeenya kana kan bara 28 guutuu ammoo dhiiga boo’uu bira kutee sammuudhaanis ni maraate (insane) or (totally menal sick) ta’e. Kun kan barate qofa otoo hin taane qoteen bulaan keenya hundi ni maraatee jira. Kunis kan ta’uu danda’e dhaaba maqaa oromootiin hagaadhaan oroo irratti ijaaramee otoo dantaa oromoof hin taane dantaa halagaa tikisuuf haga guyyaa har’aatti jira. Kanaaf jijjiirama hundee nu barbaachisa. Sossobbiin goyyoomuun ni gaha. Dhaaba gowwoomsa oromoof #OPDO irraa gara #ODP of jijjiire jedhee otoo baati illee hin lakkaayatin bakka durii isaani sanatti deebi’uun hidhaa , ajjeechaa akkuma itti fufetti deemaa jira. OPDO’n kan jiru ajjeesaa kan du’e kaastee faarsuutti jirti. Nuti kan jiru jiraachifachuu barbaanna malee lakkoobsa hir’isuu hin barbaannu. Kanaaf gaaffiin Qeerroo walii galaa dhaaba OPDO fi EPRDF jedhamu hin barbaannu.
Jijjiiramni waan haaraa fida malee waan darbe kan uummanni jibbee itti qabsaa’uun dhabamsiise nutii faarsuun OPDO-Lammaa Magarsaa fi EPRDF-Dr. Abiyyi Hayilesillaasee ekeraa isaa oromoo irratti dhiichisan tuffii qotee bulaa oromoo #Baalee fi Wallo akkasuma buqqaatii ilmaan Tuulamaa tuffachuudha. Oromoon mootummaa isaaf dhaabbatu dhaabbachui qaba malee kan oromoo ajjeesuu fi hidhu goobsuun hin ta’u.
Hiriirri kun ajjeechaa lammii keenya #Wallaggaa fi #GUJII irratti deemus akka dhaabatu gasfachuu qaba. Har’as EPRDF fi OPDO’n meeshaa gurguddaa uummata keenya fixuuf gara Lixaa fi Gujiitti guuraa jiru . Kunis akka dhaabbatu dubbii lafa keenyaa fi ajjeechaaf hidhaa uummata keenya akka dhaabbatu gaafachuu qabna.
Kan hidhames oromoon hundi haa hiikamu.
Qeerroo Amboo irraa !!
Waamicha Qeerroo fi Qarree Guutuu oromiyaa tiif !!
Dhiigni ilmaan oromoo 5000 ol sababa master plan tiif dhangala’e otoo galma hin gahiin tasa daandiitti hin hafu.waadaatu Galletu nurra jirra.
Guyyaa Har’aa irraa calqabee 28 fi 29/6/2011 Ganama sa’a 2:00 irraa calqabee Hiriira Nagaa gaggeessuuf Qeerroo fi qarreen waliif gallee jirra.
Magaalotaa fi Gandoota baadiyyaa hundatti gaggeeffama.
Hiriirri gaggeeffamus karaa Nagaa fi tasgabbiin raawwatamuu qaba.
Ajandaa hiriira kanaa…
1ffaa,Master plan marsaa 2ffaa akka hojii irra hin oolle ni mormina.
Mootummaan Ummata Akkuma bara durii goyyoomsuun haa dhaabbatu.
2ffaa ,Finfinneen hatattamaan bulchiinsa Oromiyaa jalatti haa deebitu.
3ffaa,Yaroo Diinnonni keenya Injifannoo dhiiga keenyaan fidne nu harkaa buutuuf gulufaa jiran Teenyee hin ilaalluu.Oduu sobaa Mootummaa irraa hin barbaannu.mootummaan Waan odeessu haa raawwatu.
4ffaa, Qotee bulaa Oromoo irraa buqqisuun manneen ijaarraman jiraattota Finfinneef kennuun hatattamaan dhaabbatee guutumaan guututti qotee bulaa Oromoo achirraa buqqa’ee fi uummata Oromoo daangaa irraa buqqa’eef haa kennamu.
5ffaa,Hanga filannoon dhufu milka’uutti opdon waadaa galtee deebisuu waan dadhabdeefi Injifannoo xiqqoo oromoon argate itti fufsiisuu hin dandeenye.Otoo Oromiyaan hin diigamne Opdon Tumsa hunda hirmachiiseen Fkn……
# Dhaabbolee siyaasa oromoo ciccimoo waliin #Qeerroo fi qarree Waliin
#Hayyoota oromoo waliin hanga filannoo tti waliin haa bulchan.
6ffaa, Ilmaan Oromoo maqaa ABOn hidhuun haa dhaabbatu.warreen hidhamanis haa hiikaman.
7,ffaa,Qabeenya oromoo fi Oromiyaa irratti kan murteessu oromoo dha malee alagaa miti.
8ffaa,Waggoottan 27 darban keessa qaamonni sadarkaa gadii irraa hanga sadarkaa gubbaatti ilmaan Oromoo hiisisaa, ajjeesisaa, reebsisaa,achibuutee dhabamsiisaa, saamaa, turan seeratti nuuf haa dhihaatan.
9ffaa,Jaal Nadhii Gammadaa fi Hidhamtoonni siyaasaa bara dheeraaf achi buuteen isaanii dhabaman mootummaan deebii atatamaa haa kennu..
Waliif haa dabarsinu.
Oromoon Galaana !!!
Akkuma barreen darbanii Tokkummaan keenya Akka Guutuu oromiyaa tti cimee itti haa fufu !!
Injifannoo nu hafes sakkii tokko malee Ni Gonfanna !!!
jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raaw’atameef haqni .
“ጠቅላይ ምኒስትር ዐቢይ አሕመድ ሥልጣን ይልቀቁ” የኦሮሞ ተቃውሞ አራማጆች